Global Voices teny Malagasy » Lahatsary: ​​Ahoana ny ataon’ny polisy sy ireo manampahefanan’ny fadintseranana amin’ireo bilaogera rehefa any amin’ny seranam-piaramanidin’i Cairo? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Febroary 2019 4:00 GMT 1	 · Mpanoratra Ramy Raoof Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Ejipta, Mediam-bahoaka
Ny 21 Oktobra 2009, nosakanan'ireo mpitandro ny filaminana tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Cairo ilay bilaogera Ejiptiana Wael Abbas  raha handeha hiverina tany Cairo iny izy. Tamin'ny fotoana roa nandalovany  tao amin'ny seranam-piaramanidina dia tsy nandeha niaraka tamin'ny solosainany enti-tanana na ny kapila CD-ny, na ny mémoire flash sy ny carte mémoire-ny i Abbas satria nogiazana  tamin'ny fiandohan'ny taona 2009 izany. Noho izany dia tsy nisy na inona na inona nogiazana tamin'ity indray mitoraka ity.
Saingy nokarohin'ireo manampahefana ny kitapon'i Wael, nisava ny zava-drehetra tao. Nisy ihany koa ny fikasana haka ny fakantsariny, saingy nanapa-kevitra ny hamela izany ilay manampahefana rehefa tsy nahavita namelona ilay fakantsary.
Azon'ireo bilaogera sy mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona sary ilay manampahefana nikaroka ny kitapon'i Abbas.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/05/134257/
 fotoana roa nandalovany: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2009/08/10/egypt-security-officers-continuous-confiscating-digital-devices/